Reunion: Mavitrika mibilaogy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jolay 2018 4:46 GMT
Manakaiky an'i Repoblika Demokratikan'i Kongo, iray amin'ireo tontolon'ny bilaogy mavitrika indrindra ao amin'ny firenena miteny Frantsay i Reunion, Departemanta Frantsay am-pitandranomasina miorina ao amin'ny Ranomasimbe Indiana ao Atsinanan'i Afrika. Manazava ny fomba fiasa mavitrika na maneho izany ny vavahadiin-tseraserany Reunion Permanente. Manaraka hatrany ireo bilaogeran'i Reunion am-pitandranomasina, tahaka an'i Sandy ao amin'ny Reunion-USA2 izay monina ao Etazonia mihitsy aza ny vavahadin-tserasera; miezaka manazava ny fomba fijeriny mikasika ny kolontsaina Amerikana ny bilaogy Reunion-USA2. Mpiserasera malaza manokana monina ao amin'ny nosy i Pierrot Dupuy, izay manana bilaogy ahitana vaovao farany hatrany isan'andro mifantoka amin'ny raharaha ankehitriny ao amin'ny nosy sy Maorisy mpifanolo-bodirindrina mahaleotena. Bilaogera hafa, Jean-Paul, mamintina ny vaovao lehibe ao amin'ny nosy ao amin'ny bilaoginy Dijoux.re isaky ny Alahady.
Fahasahiranana vao haingana tao amin'ny vaovaon'ny firenena sy ny bilaogy ny fielezan'ny aretina Chikungunya eo an-toerana sy ny voka-dratsiny eo amin'ny fizahantany, ny fikorianan'ny tain'afotroa matetika miseho miharihary ao amin'ny volokano eo an-toerana izay mampiseho sary amin'izany hatrany ilay bilaogera Audrey monina ao Frantsa ary manana ny bilaogy Reunion Passion. Naelin’ ny Zarabes, bilaogin'ny vondrom-piarahamonina miozolomana Indiana eo an-toerana tamin'ny bilaogy ihany koa ny tantara kolikoly vao haingana mahasaringotra manampahefana ao an-toerana Samia Badat. (Mampihomehy fa araka ny fanazavan'ny lehiben'ny bilaogy, ny voambolana kreôla Zarabes izay ampiasaina ao amin'ny nosy mba hanondroana ny ankamaroan'ny mponina miozolomana Indiana dia avy amin'ny voambolana Frantsay manondro ny Arabo.) Ary tsy tokony mahagaga raha lohahevitra miverimberina ny fifandraisana feno fihenjanana indraindray amin'i Frantsa, anisan'izany ny tolona mahomby manohitra ny fahazarana manavakavaka amin'ny fampiantranoana atao ao amin'ny tanibe Frantsa amin'ireo olom-pirenena Frantsay am-pitandranomasina avy any Reunion, Martinika, Goadelopy, Guyane sy ireo faritany sy departemanta am-pitandranomasina Frantsay.
Tamin'ireo songadina tamin'ny herinandro, Jean-Paul ao amin'ny Dijoux.Re, nanolotra vaovao farany momba ny volokano tao an-toerana, izay mbola mipoitra ka sakanan'ny manampahefana nandritra ny roa taona farany ireo mponina ao an-toerana mba tsy hijery izany zava-mitranga izany. Mikasika ny Chikungunya indray, nanazava ilay bilaogera fa biôlôjista roa no nampifandray vakisiny miady amin'ny bonibony (anti-rubeole) amin'ny fitsaboana mety azo atao. Mandritra izany, tamin'ny fanazavana mazava kokoa, Sandy monina any Etazonia manana ny bilaogy Reunion-USA2 nanazava ny dikan'ny horonatsarimihetsika tantaram-pitiavana ara-poko ao Amerika “Something New“.
(Sary eo ambony: Fipoahan'ny Volokano 2004, Reunion, avy amin'i Hugo aka Hughes Leglise.)